Sonix: Ntughari akpaaka, Nsụgharị na Ndepụta Okwu na 40 + Asụsụ | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 6, 2021 Wenezdee, Jenụwarị 6, 2021 Douglas Karr
Ọnwa ole na ole gara aga, m kesara na etinyegoro m igwe ntụgharị asụsụ nke ọdịnaya m ma ọ gbawara iru na uto nke saịtị ahụ. Dị ka onye mbipụta akwụkwọ, uto nke ndị na-ege m ntị dị oke mkpa maka ahụike nke saịtị na azụmaahịa m, yabụ ana m achọ ụzọ ọhụrụ iji ruo ndị bịara ọhụụ new na ntụgharị okwu bụ otu n'ime ha.
N'oge gara aga, ejirila m Sonix nye m ndenye ederede nke pọdkastị m… mana ha nwere ọtụtụ tọn iji nye ha site na ikpo okwu ha. Sonix na-enye ndenye ederede, ntụgharị asụsụ, na ntụgharị okwu nke ọsọ ọsọ, ziri ezi na ọnụ ọnụ:
Nchekwa akpaaka - Sonix si na ihe nchọgharị na-enye gị ohere ịchọ, kpọọ, dezie, hazie, na ịkekọrịta transcripts gị n'ebe ọ bụla na ngwaọrụ ọ bụla. Zuru oke maka nzukọ, okwu nkuzi, ajụjụ ọnụ, ihe nkiri… ụdị ọ bụla nke ọdịyo ma ọ bụ vidiyo, n'ezie. I nwekwara ike idobe-transite gị transcriptions na a omenala ọkọwa okwu ị nwere ike ịnọgide na-enwe gafee na akaụntụ. I nwekwara ike mbupụ transcription site na Okwu, Text, PDF, SRT, ma ọ bụ VTT faịlụ.
Ntụgharị akpaaka - Jiri igwe ntụgharị ntụgharị akpaghị aka nke Sonix sụgharịa ederede gị na nkeji. Mee ka asụsụ mbaụwa iri atọ mụbaa. Dabere na atụmatụ gị, ị nwere ike ịnweta onye nchịkọta ntụgharị ntụgharị ihe nchọgharị, ntụgharị ntụgharị akụkụ-n'akụkụ, na ọtụtụ okike ndepụta okwu asụsụ.
Ndepụta akpaghị aka - Mee ka vidio gị dị mfe, nyocha, na itinyekwu aka na ya. Akpaghị aka ma na-agbanwe agbanwe ka i wee nwee ike hazie ma mezie ihe zuru oke. Dabere na atụmatụ gị, ịnwere ike ịkekọrịta ndepụta okwu na-akpaghị aka, gbanwee koodu oge site na millisecond, dọrọ ma gbasaa usoro iheomume, hazie font, agba, nha, na ọnọdụ, na ndepụta okwu ọkụ na vidiyo mbụ.
Ikpokoro a na-enye ton nke ngwaahịa ndi ozo iji bulie ike gi. Na Sonix mgbasa ozi ọkpụkpọ -enyere gị ịkekọrịta obere vidiyo na sekọnd ma ọ bụ bipụta zuru transcripts na ndepụta okwu. Nke a dị mma maka iji ya mee ihe ma ọ bụ mbipụta web iji mee ka ọtụtụ ndị ọzọ gaa na weebụsaịtị gị.
Enwekwara mmekorita na sistemụ njikwa faili na ikikere ọtụtụ ndị ọrụ iji nye gị ohere inye ndị ọrụ ha ohere ibugo, kwuo, dezie ma gbochie ịnweta faịlụ ma ọ bụ folda. Nwere ike ịhazi ma chọọ nsụgharị gị, na-achọ okwu, ahịrịokwu, na isiokwu n'ime ọdịnaya gị.
Site na sistemụ ọgbakọ na ntanetị na nyiwe vidiyo, Sonix bụ nnukwu mgbakwunye na arụmọrụ ọdịnaya gị na vidiyo.
Nzukọ ntanetị ikpokọta njikọta gụnyere Mbugharị, Otu Microsoft, UberConference, Cisco WebEx, GoToMeeting, Google Meet, Loom, Skype, RingCentral, Join.me, na BlueJeans.
Na-edezi ikpo okwu njikọta gụnyere Adobe Premiere, Adobe Audition, Final Cut Pro Na Uchu Media Composer, na-adị mfe ijikọ na ngwa ndị otu gị iji nweta ọtụtụ ihe na Sonix.
Ndị ọzọ workflow njikọta gụnyere Zapier, Dropbox, Google Drive, Roam Research, Salesforce, Evernote, OneDrive, Gmail, Box, Atlas.ti, nVivo, na MaxQDA.
Atụmatụ ọnụahịa gụnyere ego ị ga-akwụ ụgwọ dị ka ị na-aga, ndenye aha ego, na ndebanye aha ụlọ ọrụ.
Nweta minit 30 nke transcriptions na Sonix
Ngosi: M na-eji Ozi Ntuziaka ebe m nwere ike nweta free transcription nkeji si Sonix.
Tags: Adobe nkuadobe premierentụgharị okwuntụgharị asụsụ ọdịyoonye na-ede mgbasa ozi na-anụ ọkụ n'obiBlueJeansCisco WebExnjedebe ikpeazụ nke pro proNzuko GooglennwetaJikọọEfuNgalaba MicrosoftOgigeskypesonixsobtaiteltranscriptiontranslationUberConferencevideo sobtaitelntụgharị vidiyontụgharị vidiyombugharị